दोस्ताना २ ले पाउँला त सफलता ?
पुनस्र्थापना कि चुनाव भन्ने अझै अस्पष्ट : पौडेलको पहलमा कांग्रेस फेरि संघर्षमा
सफलता हात लागेपछि दङ्ग प्रियंका, यसरी साटिन् खुशी !
अष्ट्रेलियामा डुबेर एक नेपालीको निधन !
हलिउड चलचित्रमा काम गर्दै तेस्रोलिंगी मोडल अञ्जली
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधनको आज ६ महिना पुरा भएको छ । उनको निधनले बलिउडमा नयाँ तरङ्ग नै सृजना गर्यो । बलिउडमा नेपोटिजम, गुप्रिजम तथा ला गुऔ षध सेवनको बारेमा हंगामा नै भच्चियो जस्को प्रत्यक्ष असर भर्खरै क्यारियरको सुरुवात गरिरहेका अभिनेत्रीहरुलाई पनि पर्यो ।
आज उनको निधनको ६ महिना पुरा भएको छ । उनको निधनपछि उनको रहस्यमय मृत्यु भएको फ्यानहरुले ट्वीटरमा उनको न्यायको लागि फेरि आवाज उठाउन थालेका छन् । ट्वीटरमा #Oath4SSR भनेर ट्रेन्ड नै चलाएका छन् । जुन अहिले भाइरल भइरेहको छ ।
जब सुशान्तले हलिउडतर्फ पाईला अगाडी बढाए…
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधनको ७ महिना भइसकेको छ । उनको निधनमा बलिउडमा नयाँ तरङ्ग नै सृजना गर्यो । बलिउडमा नेपोटिजम, गुप्रिजम तथा लागुऔषध सेवनको बारेमा हंगामा नै भच्चियो जस्को प्रत्यक्ष असर भर्खरै क्यारियरको सुरुवात गरिरहेका अभिनेत्रीहरुलाई पनि पर्यो ।
उनको निधनको कारण खुल्न नसकेपछि निधनको रहस्य सेलाईसकेको छ । उनको निधनको मुद्दालाई अगाडी बढाएकी उनकी बहिनी स्वेता कृति सिंहले पनि आफ्नो आफ्नो एकाउन्टबाट सबै कुराहरु हटाइसकेको छिन् ।
अहिले सुशान्तको बारेमा नयाँ खुलासा भएको छ । सुशान्तको एकदमै नजिकको साथीले सुशान्तले हलिउडमा काम गर्न आफ्नो पाईला अगाडी बढाइरहेको बताएका छन् । लस एञ्जलमा घर किन्ने र हलिउडमा सेटल हुने सुशान्तको योजना रहेको साथीलाई उद्दित गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यम पिंकभिल्लाले बताएको छ ।
प्राबिधिक क्षेत्रमा फड्को मार्दै महाबौद्ध सहकारी !